ममाथि पूर्वाग्रह भो ‘लप्पनछप्पन नजान्दा पछि परियो’ – Gulmiews
ममाथि पूर्वाग्रह भो ‘लप्पनछप्पन नजान्दा पछि परियो’
November 2, 2015 Sanju Kauchha
No comments	२०५० सालमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा जिप दुर्घटनामा निधन भयो। दासढुंगामा ज्यान गुमाउने भण्डारी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्न सफल भए पनि संगठन विभाग प्रमुख आश्रितकी पत्नी माया ज्ञवाली भने लगभग गुमनाम अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसै प्रसंगमा दासढुंगा घटना, आगामी दिनका योजना र एमालेले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर आश्रित पत्नी ज्ञवालीसँग नेपाल समाचारपत्रले विस्तृत कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः
यहाँको अहिले कसरी गुजारा चलिरहेको छ ?
–अहिले सामान्य रूपमा गुजारा चलाइरहेको छु। नियमित आयस्रोत केही पनि छैन। भगवान् भरोसामा जीवन चलिरहेको छ।
छोराछोरी पढाउन पार्टीले सहयोग गरेको छ कि छैन ?
–शुरूमा निकै गाह्रो भयो। छोराछोरी सानै थिए। छोरा पढाइमा तेज भएकाले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना गरें। पछि मदन–आश्रित प्रतिष्ठानबाट शुल्क तिरिदिने काम भयो। छोरीलाई एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुल भक्तपुरमा संगीता हमाल म्याडमले अत्यन्तै थोरै शुल्क लिएर आवासीय विद्यालयमा राखेर एसएलसीसम्म पढाइदिनुभयो। त्यसपछि हरि पाण्डेले छोरीलाई १२ कक्षासम्म पढाइदिनुभयो। स्नातक आफैं पढिन् र विवाह भयो। छोरा चीन सरकारले दिएको छात्रवृत्तिमा एमबी सकेर थेसिसका लािग प्रयास गर्दै छ।
काठमाडौंमा कसरी बसिरहनुभएको छ ?
–विगत २०५८ सालदेखि एउटै घरमा भाडामै बसेको छु। २०५२ सालमा सरकारले ५ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। एक जना अस्ट्रेलियामा बस्ने पार्टीको बहिनीले आश्रित कमरेडलाई सम्झेर मायाजीलाई केही सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले साढे दुई आना जग्गामा तीनतलाको ढलान गरेको छु। पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन। मलाई आशा छ– हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, मेरो लागि पनि मन पग्लिन्छ होला। हामी जस्तोलाई त केही गर्ला नि ?
तपाईंलाई पार्टीको कार्यक्रममा बोलाइन्छ कि बोलाइँदैन ?
–वर्षको एक दिन मदन–आश्रित स्मृति दिवसको दिन बोलाइन्छ। जीवनराज आश्रित जन्मोत्सवमा अञ्चलस्तरीय कार्यक्रम हुन्थ्यो, अहिले त सम्पर्क मञ्चले पनि कार्यक्रम गर्न छोडेछ क्यार मलाई कुनै खबर नै छैन। बुटवलमा आश्रितको स्मृतिमा देवेन्द्र घिमिरेले स्मृति भवन बनाउनुभएको छ। सरकारबाट पनि सहयोग भएको सुनेको छु। उहाँको कामलाई चिरस्थायी बनाउनका लागि त्यो राम्रो काम भएको छ।
अहिले पार्टीको कुन जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ ?
–पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारीमा छैन। नवौं महाधिवेशन अघि म केन्द्रीय सल्लाहकारमा थिएँ। अब कता राख्छ हेरौं ? अब ऐजन ऐजन हो कि के हो थाहा छैन। सोध्न भ्याएको छैन। पार्टी संविधान निर्माण र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा जुटेकाले पनि मतर्फ ध्यान नदिएको होला।
पार्टीका नेताहरू तपाईंको अवस्था बुझ्न आउने गर्नुभएको छ कि छैन ?
–भूमिगत बेलाको जस्तो आत्मीयता र जीवन्तता अहिले छँदै छैन। सामूहिक भेलामा हेलोहाइमा मात्र सम्बन्ध सीमित भएको छ। पार्टीमा हुने माया भूमिगत कालमा जतिको खुला राजनीतिमा हुँदो रहेनछ। भूमिगत बेलामा मैले चिनेको पार्टी अहिले छैन। त्यो आत्मीयता अहिले पनि म धेरै सम्झन्छु।
मदन र आश्रितको निधनपछि पार्टीले तपाईंलाई के समस्या पर्यो भनेर सम्झियो कि सम्झेन ?
–तत्काल आलो घाउमा भरतमोहन अधिकारी र प्रदीप नेपाल आएर सम्झाउनुभएको थियो। स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्य आएर उहाँहरूले तपाईंलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले मेरो सिंगो पार्टी छ, पार्टीले नै गर्छ भन्ने जवाफ दिएको थिएँ।
राजनीतिक रूपमा तपाईंले आफूलाई पछाडि परेको ठान्नुभएको छ कि छैन ?
–जिन्दगीमा सबैले बाजी मार्नुपर्छ भन्ने छैन। बाजी मारेको राम्रो हो। विगतको राजनीतिमा तपार्इं भन्ने थियो मपार्इं भन्ने थिएन। आश्रित कमरेड गुल्मीको २ नम्बर क्षेत्रबाट पराजित हुनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न बाँकी थियो। २०५१ सालमा माथिल्लो पदमा गएर सभा सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने मनमा थियो। वैचारिक रूपमा अत्यन्तै राम्रो कला थियो। बैठक बस्दा छलफल गर्दा टिपेका टिपोटहरू घर व्यवहारका कुराहरू। हामीबीच लेनदेन हुन्थ्यो। आश्रितलाई दिनु यति छ, मायालाई दिनु यति छ भनेर हिसाब राख्थ्यौं। अत्यन्तै अनुशासित, संगीत पनि जानेको र गीत पनि लेख्ने एकेडेमिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट मैले सिकेका कुरा धेरै छन्। उहाँले सिकाउनु त भयो तर मैले व्यावहारिक रूपमा लागू गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिनँ।
उहाँ नरहेपछि छोराछोरी सानै थिए। मैले छोडेर राजनीतिमा लाग्ने अवस्था पनि थिएन। मेरो माइती पनि टाढा गाउँमा छोराछोरीले राम्रो शिक्षा नपाउलान् भन्ने चिन्ता। मैले पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीलाई दिनुपर्छ भनेर काठमाडौं आउनेबित्तिकै कृषि सामग्री संस्थाको पाँचौं तहमा काम गर्न थालेर छोराछोरीलाई होस्टल राखें। मैले बुबा र आमा दुवैको माया दिनुपर्ने थियो। दुवै भूमिका निर्वाह गर्दा समस्या भयो।
सक्रिय राजनीतिमा लाग्न तपाईं कहाँ–कहाँ चुक्नुभयो ?
–प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सहाना प्रधान र मनमोहन अधिकारीले चुनावमा उठ्नुपर्छ भनेर फोर्स गर्नुभएको थियो। माया तिमी लड, तिम्रा लागि हामी छौं भन्नुभएको थियो। मैले सोचें– राष्ट्रिय सभामा मेरो पक्कै हुन्छ। त्यतिखेर टेबुल नै ठोक्न गएको भए मैले टिकट पाउँथें। मलाई सहानुभूति पनि थियो। मेरो माइती जिल्ला पनि हो। मलाई गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट लड्नु भन्नुभएको थियो। मैले सोचें– रामनाथ ढकाल पनि आश्रित कमरेडको निकै नजिकको मान्छे उहाँलाई नै छोडिदिन्छु भन्ने सोचे र छोडिदिएँ। त्यो नै मैले गल्ती गरें। त्यति बेला मैले सहज रूपमा जित्ने रहेछु। देश नै एमालेमय थियो। पछि मलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएन। ममाथि त्यहींबाट पक्षपात शुरू भएको थियो। २०५४ सालमा आएर पार्टी विभाजित भएपछि त्यही इगोले गर्दा म मालेमा लागे।
माले र एमालेबीच एकीकरण हुँदा पनि फसें। आश्रितको जन्मोत्सव थियो साउन १८ गते। ठ्क्याकै त्यही दिन पारेर केपी ओली र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी कार्यक्रममा मैले एमालेमा आएको घोषणा गरे। मैले सोचें– अब पार्टीमा फर्किएपछि मप्रति पूर्वाग्रह रहने छैन। पछि सांगठनिक रूपमा अगाडि बढ्न प्रदीपलाई पनि भेटें। माधव नेपाललाई पनि पत्र लेखेर दिएँ। मलाई केन्द्रीय कमिटी नभए पनि क्षेत्रमा राखिदिएको भए हुन्थ्यो। अलि माथि नै राखेको भए पनि हुन्थ्यो। बरु राधा ज्ञवालीलाई अगाडि बढाउने काम भयो। ज्ञवाली, सुष्मा गौतम र हामी मालेमा सँगै थियौं। म दुई कारणले पछाडि परें– एउटा गुल्मीमा चुनाव नलड्दा र अर्को पार्टी एकीकरण हुँदा उचित जिम्मेवारी नपाउँदा। एकीकरण गर्दा वामदेवसँग म सँगै भइनँ। वामदेवहरू रिसाउनु भो जस्तो लाग्यो। माया आफ्नो खुसीले गइन् भन्नु भो कि ? मैले सोधेको त छैन। भित्र मनमा बिझिरहेको छ– ममाथि पूर्वाग्रह राखियो।
अब सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने सोच छ कि छैन ?
–हिजो जनताको मुक्तिका निम्ति लडियो। विद्याजीको गाउँ र मेरो गाउँ उस्तै हो, खासै फरक छैन। तर मेरो परिवार वामपन्थी विचारको परिवार थियो। काका नै भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। हामी सानो हुँदै अध्यक्ष माओ जिन्दावाद भन्थ्यौं। केपी ओली पनि भूमिगत कालमा गएर बसेको सेल्टर हाम्रो गाउँ थियो। धेरै साथीहरू आउनेजाने स्थान थियो। हाइवेबाट २० मिटर टाढा तर धेरै सुरक्षित ठाउँ। प्रहरी आउँदाआउँदै अल्मलिन्थे। अब बहर गोरुले नै जोत्ने हो। बूढो गोरुले जोत्नै सक्दैन भनेजस्तै अब हामी गाउँमा गएर संगठन बनाउने कल्पनै नगरौं। सञ्जिता रावल लक्ष्मी कार्कीजस्ता महिला अलि नदेखिने ठाउँमा छौं। तर पार्टीभित्रै छौं। हामीलाई पनि सक्रिय बनाइयोस्, पार्टीले ऊर्जा देओस्।
पार्टीले भूमिका दिएको अवस्थामा अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
–मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छु। म कुनै कार्यालयको जीएम पनि सहजै चलाइदिन सक्छु। १८ वर्षको शिक्षण गरेको अनुभव छ। ७ वर्ष नायब सुब्बा भएको अनुभव छ। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकवज्र वज्राचार्यको निधन भएपछि मैले तीन महिना स्वकीय सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको छु। माया ज्ञवालीको केही ज्ञान छैन भन्ने कुरा गलत हो। अवसर पाए काम गरेरै देखाउने हिम्मत अझै मरेको छैन।
पार्टीले तपाईंलाई अवसर नदिएकै हो ?
–लाइट नबालुन्जेसम्म फोकस थाहा हुँदैन। लाइट बालेर हेरेकै छैन कहाँबाट थाहा हुनु ? पार्टीले अवसर दिए म नमुना सांसद बनेर देखाउन चाहन्छु।
आश्रित हुँदा र नहुँदाको पार्टीले गर्ने व्यवहारको फरक कुन रूपमा मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
–बहुदल आएपछि पार्टीको धेरै अनुभव नै गर्न सकिएन। कोठामा महासचिव मदन भण्डारी, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल आउनुहुन्थ्यो। भूमिगत कालमा एउटा हार्दिकता, माया र सद्भाव निकै थियो। चन्दा उठाएर साथी बचाउँथें। आज त्यो हार्दिकतामा कमी हो कि ?
एउटै घटनामा परी निधन हुनुभएका मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्दा कस्तो लागेको छ ?
–एउटा महिला राष्ट्रपति हुनु नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने अविस्मरणीय घटना हो। महिला भनेका कमजोर होइनन् भन्ने यसले देखाएको छ। महिलाले पनि मुलुक थाम्छन्। आधा आकाश थाम्न सक्छन् भन्ने उदाहरण एमालेले पेस गरेको छ। म उहाँको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु।
तपाईंले विद्या भण्डारीलाई कसरी चिन्नुहुन्छ ?
–उहाँको र मेरो बाटो नै फरक पर्यो। उहाँ पार्टीको ट्रइकमा जानुभयो। क्षमता, दक्षता वा आवश्यकता हो पार्टीले सोच्यो। म त्यसबाट वञ्चित भएँ। एउटै कमिटीमा नभएपछि भेटघाट हुने प्रश्नै रहेन। पार्टी खुला भएपछि मदन र हाम्रो परिवारको प्रदीप नेपालको डल्लुस्थित घरमा भेट भएको थियो। त्यसपछि दासढुंगा घटना भएपछि रंगशालामा भेटियो। कहिलेकाहीं म समय लिएर जान्थें। भेटनुहुन्थ्यो, कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। पटक–पटक एउटै कुराले भेटिरहने भन्ने पनि हुँदैनथ्यो। सायद फुर्सद नभएर होला भेट्न त आउनुभएन। जिम्मेवारी पनि अलग भएर होला तर केपी कमरेड भने तीनपटक मलाई भेट्न आउनुभएको छ। केपीलाई म मान्छु। केपी कमरेडले सिको फाइभ घडी लिएर आउनुभएको थियो। जतनसँग राखेको छु।
दासढुंगा घटनाको छानविन गर्न सरकार र पार्टीले छानविन समिति पनि बनायो। एमालेले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो तर पनि घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
–म कानुन पढेको विद्यार्थी परिनँ। घटना भएलगत्तै ड्राइभर अमर लामा पनि जीवित नै थिए। त्यतिखेर सोधपुछ गर्न कमी भयो कि ? उसले गरायो वा अरूबाट भयो ? त्यो त रहस्यमय नै छ। केही चिज हरायो भने तत्काल खोज्न पो सजिलो हुन्छ। वर्षौंपछि गाह्रो हुन्छ। विस्तारै हराउँदै जाने हो कि भन्ने लागेको छ।
घटनापछि अमर लामासँग तपार्इंको भेट भयो कि भएन ?
–एकचोटि नेपाली कांग्रेसमा गएपछि दिदी सञ्चै हुनुहुन्छ भनेर फोन गरेका थिए। मलाई माइन्ड नगर्नुहोस्, घटना भयो म दुःखी छु भनेका थिए। दिदीले पकाएको चिया पनि खाएको छु। मलाई टाढा देखिएको छ त्यस्तो तपाईंबाट नहोस् त्यही चाहन्छु भनेका थिए। दोस्रो म एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा हुँदा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा ऊ झुलुक्क देखिएर नमस्ते भनेको थियो। अब मैले के गर्ने कुकुरले झैं झम्टिनुभएन।
एमालेकै सरकार छ, घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउला त ?
–मदन र आश्रित देश, जनता र पार्टीका लागि लाग्नुभएको थियो। संस्था बनाउने स्मृति भवन बनाउने विस्तारैविस्तारै भएको छ। उहाँहरूलाई सम्झनु राम्रो कुरो हो। स्कुल कलेज खोलिएको छ। पार्टीले बिर्सने काम नगरोस्।
त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ त ?
–दासढुंगा घटनाको छानविन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय छानविन टोली गठन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशबाट सम्भव छैन। उहाँहरूको इच्छा राजतन्त्र फाल्ने थियो। जीवितै रहँदा त पूरा भएन तर ढिलै भए पनि राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि उहाँहरूलाई बिर्सनुहुँदैन।
पार्टीले तपाईंलाई के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
–म सामान्य खालको घटनामा परेको परिवार होइन। गुजारासँगै मलाई पार्टीले राजनीतिक रूपमा चिन्ने स्थान पनि दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनकि धेरै ठाउँमा बसे। अनेक ढाँटछल गरेर पार्टीमा हिँड्यौं। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन चाहन्छु। सरकारमा गएर कंलक लाएर बर्खास्त हुन खोजेको छैन। उच्च सम्मानका साथ काम गर्छु। मलाई पैसाको प्रलोभन छैन। पैसाको राजनीति गर्ने भए त अर्को पार्टीमा गए भइहाल्यो नि ? राजावादी र माओवादीले तपाईंलाई माथिल्लो तहमा लैजान्छौं भन्दा पनि म गइनँ। राजनीतिमा चलाखी चाहिँदो रहेछ त्यो ममा छैन। पानी त्यस्तो खाएर हो कि ? म अहिंसावादी र गान्धीवादी। इमानदारिता छ तर चलाखी भएन। लप्पनछप्पन केही गर्न जानिनँ।
पैसा दिएर राज्यलक्ष्मी गोल्छाले सांसद हुने अवसर पाउनु भो, तपार्इंले पाउनुभएन, कस्तो लाग्छ ?
–अझै पनि आशा छ। मेरो पतिले निष्ठाको रानजीति गर्नुभएको थियो। पुर्खाले गरे भने सन्ततीका लागि हुन्छ। म कडा हुन सक्दिनँ। अहिले पार्टीमा विकृति पसेको छ। यो विकृति हटाउनुपर्छ। मियो नहुँदा विकृति छिर्यो। अब बलियो मियो पार्टीलाई चाहिएको छ।
Related Posts	राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ?...	September 14, 2016	लक्ष्य अर्कै थियो सञ्चारकर्मी बने – अनिता खत्री...	August 30, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	पति पत्नी एकै साथ पत्रकारिता तर्फ